Soosaarayaasha Quudiyeyaasha - Shirkadaha Quudiyeyaasha & Warshadaha Shiinaha
Gogosha weel qoto dheer
Magaca Badeecada Muuqaal qoto dheer Gaar ahaanta Midabka 6 * 4cm Qalabka Resin Model NS-84 Muuqaal aan la Goyn Karin Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ee kicisay, u dhowda dabiiciga Hordhac u isticmaalidda deegaanka bey'ad ahaan, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska sare, kuwa aan sunta lahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Resin baaquli geeska yar
Magaca Badeecada Weelka korantada yar ee geeska ah Cabbir midabkiisu yahay 8.2 * 8 * 2.5cm Matin Resin Model NS-83 Feature Unbreakable Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ee kicisay, u dhawda dabiiciga Hordhac uumiga ilaalinta bey'adda sidii shey cayriin ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska sare, kuwa aan ahayn sun iyo dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Gogos maddiibadda oo qari
Muuqaal Magaca Badeecada Gogosha oo qarin Nooca Sheegashada 10 * 9 * 3cm Qalabka Resin Model NS-77 Muuqaal aan la Goyn karin Si fudud loo nadiifiyo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ee kicisay, u dhaw dabeecadda Hordhac u difaacida bey'ada sidii shey cayriin ah, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, aan sunta ahayn iyo dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Resin baaquli cuntada jaalaha ah L
Magaca Badeecada Weelka cuntada ee jaallaha ah L Furuxinta midabka 22 * ​​24 * 3.3cm Qalabka Resin Maaddada Model NS-71 Feature Unbreakable Fudud oo nadiif ah lana jeermi karo Nolosha dabiiciga ah ee kicisay, u dhowda dabiiciga Hordhac uumiga ilaalinta bey'adda sidii alaab cayriin ah, ka dib daaweynta heerkulka ka-hortagga heerkulka, aan ahayn -maqal iyo dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Muuqaha haraaga ah oo laba jibbaaran
Muuqaal Magaca Badeecada Weelka Qanjiraha leh leh sagxad L Midabaynta Nooca 20 * 25 * 6cm Qalabka Resin Qalabka NS-70 Feature Unbreakable Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ah ee kicisay, ku dhow dhow talaabooyinka badbaadada dabeecadda gudaha weelka si looga hortago inay daadku soo gaaraan Hordhac u ilaalintii deegaanka bey'ad ahaan mid cayriin wax, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska jeermiska sareeya, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Resin weelka biyaha socda
Magaca Badeecada Soosaarida weelka biyaha Sifeynta Midabka 15 * 10cm Qalabka Resin Model NS-67 Muuqaalka Loogu talagalay qaanadaha loo yaqaan 'reptiles', amphibians, fududahay in la nadiifiyo, aan sun lahayn iyo waxyeello lahayn. Way fududahay in la nadiifiyo oo la nadiifiyo Nolosha dabiiciga ee kicisay, ee u dhow dabeecadda Hordhac Kahortagga deegaanka bey'adda u tahay shey ceyriin ah, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Resin geeska cuntada cuntada
Magaca sheyga Resin geeska cuntada ee Cabbirka Cabbirka midabka 7.5 * 8.5 * 3cm Qalabka Resin Maaddada Qaabka NS-66 Muuqaal aan la Goyn karin Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo naqshadda geed gooshta ayaa ka dhigaysa inay xariifku ku dhawaadaan dabiicadda. Kicinta nolosha dabiiciga ah, u dhaw dabeecadda Hordhac Kaabayaasha ilaalinta deegaanka sida ashyaa'da, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Resin khadadka midabka casaanka ah ee S
Magaca sheyga Resin baaquli casaan S S midabka midabka 9 * 7 * 2.5cm Matin Resin Model NS-65 Feature Unbreakable Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ee kicisay, u dhaw dabeecadda Hordhac u difaacida bey'ada sidii shey ceyriin ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska sare, aan -maqal iyo dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Muuqaal qardhaq jiil leh oo leh xariiq casaan XS
Shayga Badeecada Muuqaal Khadka Cad ee Jiilaalka XS Xareynta Midabka 5 * 4 * 3cm Qalabka Resin Qalabka NS-64 Feature Unbreakable Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ah ee kicisay, u dhowda dabiiciga Hordhac uumiga ilaalinta bey'ada sidii shey ceyriin ah, ka dib daaweynta heerkulka kahortaga heerkulka, aan ahayn -maqal iyo dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Round resin baaquli xariijimo cawlan L
Magaca Badeecada Wareegtada resin baaquli cawlan L Caddaynta Midabka 9.5 * 6cm Waxyaabaha Resin Maaddada Model NS-63 Feature Unbreakable Fudud oo nadiif ah oo jeermis ku jira Nolosha dabiiciga ah ee kicisay, u dhow dabiiciga Waxaa loogu talagalay kuwa wax lagu buufiyo, kuwa loo yaqaan 'chihibians', si sahal ah loo nadiifin karo, aan sun lahayn iyo aan dhib lahayn. Hordhac Kaydinta Ilaalinta Bey'adda sidii shey cayriin ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska jeermiska badan, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda
Muuqaha cuntada ee ku-taal fagaaraha
Muuqaal Magaca Badeecada Weelka cuntada resin cuntada Qeexitaanka Midab 14.5 * 12.5 * 3cm Qaabka Alaabada Alaabada Sunta NS-62 Feature Ka samee resin, ma fududa in la jabiyo, adkeyso oo waara. Si fudud oo loo nadiifiyo loona jeermis-duri karo naqshadda geed gooshta ayaa ka dhigaysa inay xayawaanku u dhawaadaan dabiicadda. Kicinta nolosha dabiiciga ah, u dhaw dabeecadda Hordhac Kaabayaasha ilaalinta deegaanka sida ashyaa'da, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Xanrunta, jilbaha, Frogs Horned, Bullfrogs ...
Resin khadadka madoow ee M
Magaca sheyga Resin baaquli cawlan M midab Tilmaanta 10 * 2.5cm Qalabka Resin Model NS-61 Muuqaal aan la Goyn Karin Si fudud loo nadiifin karo loona jeermi karo Nolosha dabiiciga ee kicisay, u dhow talaabooyinka nabdoonaanta dabiiciga 'gudaha weelka si looga hortago inay ku hafato Hordhaca Ilaalinta deegaanka ee maadada ceyriinka ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska sare, kuwa aan sunta lahayn iyo kuwa aan dhadhanka lahayn. Xannibaadda, jilbaha, Frogs-ga horeed, Bullfrogs, qod-roobaadka roobaadka, liinleyda